UShandu uvuma eyobunzima bokungena eqenjini kwiPirates
July 16, 2021 Impempe.com
Okokuqala ngqa uBandile Shandu esuka eMgungundlovu eyohlala kwelinye idolobha njengoba esefudukele goli la asayine khona kwi-Orlando Pirates. UShandu ungomunye wabadlali abethulwe yileli qembu laseSoweto njengeqinisa ngabo isikwati sayo.
Ubedlala kwiMaritzburg United alokhu aba kuyo kusukela eqala ukudlala esigabeni esikhokhelayo njengoba khululea kuyo. Ekhuluma okokuqala kusukela asayina, uShandu ukuvumile ukuthi kuzoba nzima, kodwa wethembisa ukuqhbeka nokuzikhandla.
“Kunzima uma ubheka izinga labadlali i-Orlando Pirates enabo (abadlala esiswini njengaye),” kusho lo mdlali oneminyaka engu-26. “Kodwa ngizoqhubeka nokwenza lokhu okungisebenzele ngize ngibe lapha namuhla.
“Ngihlezi ngisimisele ngokusebenza kanzima, ngenze konke okufanele bese ngilandela imiyalelo yomqeqeshi. Ngizama ukuthi ngandise kokukhona eqenjini ngifake wonke amandla ami.
“Ngizoqhubeka nalokho nami ngisize lapho ngidingeka khona ukuze iqembu lizuze elikuhlosile kule sizini ezayo,” kuchaza yena. Ukujwayela cishe kube lula kuShandu njengoba efice inqwaba yabantu aseke wasebenzisana nabo phambilini.
Ufike kanye noKwanda Mngonyama abedlala naye kwiMaritzburg ngesizini edlule. Bafice umqeqeshi uMandla Ncikazi obesanda kufika futhi abasebenza naye kwiMaritzburg phambilini.
Kwabesebevele bekhona kodwa abasuka nabo kuleli qembu laseMngungundlovu ngoFadlu Davids, Richard Ofori, Fortune Makaringe noSiphesihle Ndlovu.
“Ngaqala ukudlala kwiMaritzburg ngineminyaka engu-17, ngakho ukuya kwelinye iqembu yinto yokuqala ukwenzeka kimi. Ngijabule ngokuthi ngamukelwe ngemfudumalo ngozakwethu abasha anabaqeqeshi. Lokho kwenze kwaba lula (ukujwayela) futhi ngiyakubonga lokho,” kusho yena.
Njengoba eseseqenjini elikhulu, uShandu kuzomele asheshe ajwayele ukuthi uzocwaningwa ngabalandeli umdlalo nomdlalo awudlalayo. Futhi uma engenzanga kahle uzonaphazwa. Kodwa ngathi ukulungele lokho.
“Impela (ingcindezi ikhona). IPirates yiqembu elikhulu – ngelinye lamakhulukazi eNingizimu Afrika. Ngilindele ingcindezi ehlukile kule engiyaziyo. Ngiyazi ukuthlapha kuhlale kubhekwe imiphumela emihle.
“Ngiyakwazi vele lokho futhi zokwenza okusemandleni ukuthi ngiyasiza ekutheni iqembu lithole imiphumela emihle,” kusho yena. UShandu wafika esengumfana oqoqa amabhola uma kudlala iMaritzburg.
FUNDA NALA: Ihlomule ngegolide kuSaleng iPirates, kusho owayemqeqesha
IPirates kulindeleke ikhulule noma ibolekise ngabanye babadlali bayo ngesonto elizayo. Abazazi kangcono ezaleli qembu bathi kulindwe ukuthi kubonakale ukuthi omakhelwane, iKaizer Chiefs kubahambela kanjani kowamanqamu kwiCAF Champions League.
Uma iChiefs iwinile, kuzosho ukuthi iPirates ayisayi kwiCAF Confederations Cup ngoba indawo yayo izothathwa AmaZulu FC. Lokho kuzosho ukuthi ayibadingi abadlali abaningi kakhulu, bese kuba khona abadedelwayo.
Previous Previous post: UJordaan utshele abeChiefs ukuthi bangayilahli ekugcineni koweCAF
Next Next post: Uzovezwa bukhoma kwiSABC owamanqamu weChiefs